Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mmanya - Chenin Blanc ịdọ aka ná ntị: Site na Yummy ruo Yucky
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Mmanya & mmuo
Mkpụrụ vaịn bụ akụkụ nke mmanya jug sitere na California, a na-ahụkwa ya na mmanya ọcha sitere na South Africa… ọ bụ naanị na ndagwurugwu Loire ka mkpesa Vouvray na-erute ikike ya zuru oke - na-agba site na nchara ruo na-atọ ụtọ nke ukwuu. Obere ịkpachara anya dị mkpa: ịchọta Vouvray na labelụ anaghị ekwe nkwa Chenin Blanc dị mma. Iji gbochie OOPS, họrọ n'ime ndị nrụpụta kacha mma.
Vouvray bụ mmanya ọcha sitere na mkpụrụ vaịn Chenin Blanc nke a na-akọ n'akụkụ oke osimiri Loire na mpaghara Touraine nke France, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo Tours, na mpaghara Vouvray. A na-arara Appelation d'Origine controlee (AOC) ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị Chenin Blanc, anabatara Arbois na-adịghị ahụkebe na obere grape (mana adịkarịghị eji).
Ụbọchị ikpeazụ nke owuwe ihe ubi PINON na 30s
Viticulture nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na mpaghara a na laghachiri na Middle Ages (ma ọ bụ na mbụ) mgbe
Chọọchị Katọlik gụnyere ubi vaịn ndị dị n'ebe obibi ndị mọnk ndị dị n'ógbè ahụ. A na-akpọkwa grape ahụ dị ka Pineau de la Loire na ọ pụkwara ịbụ na ọ sitere na mpaghara mmanya Anjou na narị afọ nke itoolu wee kwaga Vouvray.
Na narị afọ nke 16 na 17, ndị ahịa Dutch na-ahụ maka ịkọ ubi vine na mpaghara a ga-eji maka ahia mmanya na ahịa na London, Paris na Rotterdam. Achịkọtara mkpụrụ vaịn sitere na mpaghara Touraine ka ọ bụrụ ngwakọta nke akpọrọ Vouvray. A na-ewu ụlọ mmanya site n'ọgba ndị e mepụtara site na ngwupụta nkume tuffeau (limestone) nke e ji wuo Chateaux nke ndagwurugwu Loire. Oyi, okpomoku kwụsiri ike nke ụlọ ịsa ahụ dị mma maka ọganihu nke mmanya na-egbuke egbuke emere na usoro champenoise ọdịnala wee bụrụ ewu ewu na narị afọ nke 18 na 19. Vouvray ghọrọ AOC na 1936 wee gụnye obodo Vouvray gbakwunyere obodo 8 dị nso (Chancay, Nouzilly, Vernou-sur-Brenne na Rochecorbon).
Mpaghara Vouvray dị n'elu ugwu dị larịị, nke obere iyi na iyi nke Loire gbasasịrị. Iyi ndị a na-enye aka na ọnọdụ ihu igwe pụrụ iche nke na-akwalite mmepe nke ero ero Botrytis cinerea nke na-akpata ire ere dị mma nke a na-eji na-emepụta ụdị mmanya eji megharịa ọnụ ụtọ.
Ihu igwe na-abụkarị kọntinent nwere ụfọdụ mmetụta ụgbọ mmiri sitere na oke osimiri Atlantic n'agbanyeghị na ọ dị ihe karịrị 100 kilomita n'ebe ọdịda anyanwụ. Mmanya na-adabere na ihu igwe nwere nnukwu mgbanwe mkpụrụ vaịn kwa afọ n'ihi ihu igwe na-agbanwe agbanwe. Afọ ihu igwe dị jụụ na-atụgharị ọtụtụ mmepụta gaa n'ụdị mmanya kpọrọ nkụ gụnyere Vouvray na-egbuke egbuke. Afọ ihu igwe na-ekpo ọkụ na-akwalite mmepụta nke mmanya na-atọ ụtọ, ụdị eji megharịa ọnụ.
Ebe ugwu na ihu igwe dịtụ jụụ na-eme ka owuwe ihe ubi na Vouvray bụrụ otu n'ime ndị ikpeazụ a ga-agwụ na France, na-emekarị na November. Ụdị Vouvray na-esi na nkụ ruo na-atọ ụtọ ma na-egbuke egbuke ma mara maka ísì ụtọ ifuru na uto siri ike.
Ahịhịa sitere na ahịhịa ahịhịa (maka mmanya na-egbuke egbuke) site na ụdị dị iche iche edo edo ruo ọla edo miri emi (maka Moellex dị ụtọ merela agadi). N'ozuzu, aromas ókè na milder n'akụkụ nke ufiop na-eziga hints nke ube, honeysuckle, quince na apụl (green / odo) na imi. Enwere ike inwe mmetụta dị nro nke ginger na beeswax (na-atụ aro ọnụnọ nke ire ere dị mma… chere Sauterne). Ihe na-esi ísì ụtọ dị na palate sitere na dabere, akọrọ na mineral na mkpụrụ osisi na ụtọ (dabere na ụdị).
Nkeji nkeji na-enye mmanya kpọrọ nkụ (ihe na-erughị 8 g/L nke shuga fọdụrụnụ; ụdị kpọrọ nkụ nke Vouvray) na-abụkarị brisk ma na-ebuga mineral.
A na-ahụta ubi vine Pinon dị ka otu n'ime ndị kasị mma na mpaghara Vouvray ma nwee ezinụlọ kemgbe 1786. Francois Pinon malitere ọrụ ya dị ka onye ọkà n'akparamàgwà ụmụaka, na-eweghara ihe onwunwe n'aka nna ya (1987). A na-ahụta Pinon dị ka onye na-eme mmanya siri ike na ihe ọ na-elekwasị anya bụ viticulture organic na obere ntinye aka n'ime mmanya. Julien Pinon na-eduzi ala ahụ ugbu a.
Ubi-vine dị na Vallee de Cousse ebe ụrọ na ala silica na-ekpuchi isi nkume nzu na nkume (six). Pinon na-agbaso usoro nke gụnyere ịkọ ubi ubi vine, izere fatịlaịza kemịkalụ na ọgwụ nje na iwe ihe ubi. A na-eme ihe ọkụkụ ọhụrụ niile site na nhọrọ massale (okwu na-eto eto nke French maka ịghagharị ubi vaịn ọhụrụ na mbelata sitere na osisi vaịn ochie pụrụ iche sitere na otu ma ọ bụ ihe ndị agbata obi); A naghị eji clones nursery. Osisi vine ya nkezi 25 y/o. Emere ụlọ ahụ nzere organic na 2011.
Ịṅụ mmanya na-aba n'anya na-apụta na gbọmgbọm osisi na ndị agadi na igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ foudres (nnukwu okpu, ihe dị ka okpukpu abụọ nke barrique Bordelaise) iji nweta nguzozi n'etiti mkpụrụ osisi na mbelata. Enwere ebe a na-akwakọba iji wepụ ahihia ndị dị arọ na mmanya na-anọgide na-adị mma ruo mgbe a na-agbanye karama, nke na-ewe ọnwa 12 mgbe owuwe ihe ubi gasịrị iji mechaa mmanya ahụ. Pinon na-eji nwayọọ na-enyocha mmanya ya iji hụ na ha kwụsiri ike na ike ịka nká.
Pinon na-ahọrọ hectare 0.6 nke ire ụtọ, ebe na-aga n'ihu ụrọ karịa maka iko nkeji nkeji ya. Osisi vine dị ihe dị ka afọ 40. A na-eji aka na-ewe mkpụrụ osisi a, hazie ya nke ọma na pịa ụyọkọ dum. Ihe ọṅụṅụ na-esi n'ike na-asọba n'ime tankị maka mmiri ara ehi-eko achịcha na-adịru ọnwa 2-3 na-akwụsị ndammana n'ime ụlọ oyi nke Pinon nke a pịrị apị n'akụkụ ugwu tuffeau. Mmanya a na-eme agadi na ahịhịa ya dị mma maka ọnwa 4-5 na ngwakọta nke osisi oak ejiri mee ihe sitere na 500-liter oak demi-muids ruo 20-hectoliter foudres.
Na-enye anya na-acha odo odo ma na-ebuga citrus na apụl odo na imi yana ihe ngosi nke lemon zest na bee oroma. Palate na-achọpụta mkpụrụ osisi nke ose na citrus kwalitere. Ogologo ogologo oge na-enye mineral nke ziri ezi na nụchara anụcha. Ejikọtara nke ọma na salmon na tuna.
Gụọ akụkụ 1 ebe a: Ịmụ banyere mmanya nke Loire Valley na NYC Sunday
Gụọ akụkụ 2 ebe a: Mmanya French: Mmepụta kacha njọ kemgbe 1970